Iflethi okanye indlu ekwicomplex entle eyi-1BR Kwindlu Enembali yaseSt Aubin - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex entle eyi-1BR Kwindlu Enembali yaseSt Aubin
Xa iyi-375 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
Indlu eyakhiwe ngaphakathi eyi-1-Bed (+ i-sofa-bed) ekwindlu yasedolophini eneminyaka eyi-400 e-idyllic St Aubin, kwi-High St. Ngaphantsi komzuzu omnye wokuhamba ukusuka kwiivenkile zokutyela, iibhari, iikhefi kunye nezibuko, kodwa ezolileyo kakhulu kwaye ezolileyo.
Enoba utyelela iJersey ngomsebenzi okanye wonwabe, iSt Aubin yeyona ndawo ikufaneleyo. Sinokutya okumnandi neziselo kwaye sikwindawo enye phakathi kwesikhululo seenqwelo-moya neSt Helier.
Imizuzu eyi- ukusuka kwiKholeji yaseSt Brelade. I-intanethi ye-broadband ekhawulezayo kakhulu.
Le yiflethi yabucala ekwindlu enembali embindini welali yaseSt Aubin.
Kukho igumbi lokuhlala eline-TV & net flix, i-amazon prime kunye nesofa ekwayibhedi etofotofo.
Nangona kukho iindawo ezininzi ezintle zokutya, kukho ikhitshi elinento yonke kunye neSmeg hob kunye ne-double-oven kunye netafile yesidlo sakusasa.
Sikushiyela iti, ikofu ye-Illy, isonka, ubisi lwaseJersey kunye nebhotela yaseJersey xa ufika.
Kwipaseji edlulileyo ligumbi lokuhlambela, lineetawuli ezininzi, i-shower gel, ishampu ne-conditioner. Okulandelayo ligumbi lokulala elivuleke kakhulu elinebhedi enkulu enkulu kunye namashiti asemgangathweni ehotele ukwenzela ukulala kamnandi ebusuku.
I-wifi ekhawulezayo – i-375 Mbps